Enterprise Kubatana uchishandisa TWIKI
Enterprise Kubatana uchishandisa TWiki Nzvimbo dzekushandira
Chipiri, July 17, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kukosha kwekufambika kwemafambiro ekufambisa uye kutaurirana kwakashama hakugone kusapindirwa, kunyanya mune yanhasi hyper kukwikwidza nyika uko kumhanya, kuvimbika uye hunyanzvi ndiwo mantras ekubudirira. Asi masangano mazhinji anoshanda mu "silo tsika" isingakurudzi kugovana ruzivo pamabasa, mabasa, kana madhipatimendi.
Zvishandiso zvakaita seTwiki zvinobatsira mabhizinesi kuti abude mutsika dzisiri dzekudyidzana.
TWiki® inochinjika, ine simba, uye iri nyore kushandisa bhizinesi wiki, bhizinesi rekushandira pamwe, uye webhu chikuva. Iyo Yakagadziriswa Wiki, inowanzo shandiswa kumhanyisa projekiti yekuvandudza nzvimbo, gwaro manejimendi sisitimu, hwaro hweruzivo, kana chero chimwe chishandiso cheboka, pane intranet, extranet kana Internet.
TWiki iri mune yakarongeka wiki, inoshanda seyenhamba yebhizinesi Wikipedia kana iri-mumba mezvenhau network, zvichienderana nekuti bhizinesi rinosarudza kuishandisa sei. Mamaneja anogona kushandisa chishandiso ichi kumisikidza mapurojekiti, kubata zvinyorwa, kumisikidza intranet, kana kunyangwe webhu kunyorera. Twiki zvakare inobvumidza sarudzo dzepamberi senge Transclusion kana kuiswa gwaro kana chikamu chegwaro mune rimwe gwaro nereferenzi, unowana machati uye zvimwe zvakawanda zvinogona.
Kuendesa Twiki senzvimbo yekubatana kunoona kuti ruzivo rwuripo kune avo vanoruda. Vatengesi vanogona kuwana Twiki uye vawane ruzivo runodiwa pakarepo, kana kubata munhu ane mvumo munguva chaiyo, kupfupisa nguva yekutungamira yeupenyu. Kutamisa nzira dzemukati kuburikidza neTwiki kunoita kuyerera kwedata neruzivo mushe uye mushe, zvichipa kuwedzera kugadzirwa uye kupfupisa nguva dzekutungamira.
Twiki ndeye open source chikuva uye zvakare vane yakagadziriswa mhinduro. Kune avo vanoda rubatsiro rwehunyanzvi, Twiki inopa iyo masevhisi evanachipangamazano ndiani achagadzirisa, kuchengetedza uye kugadzirisa iyo Twiki.
Tags: kubatsiranakushandira pamwekubatana kwebokatwikiwiki Vasai
Iwe Uri Chibereko cheFacebook
Nzira Shanu dzeKupinza Tsika Mune Yako Yekutengesa Strategic